South Pacific Sustainable Tourism Network yakazvipira kuchengetedza dunhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » South Pacific Sustainable Tourism Network yakazvipira kuchengetedza dunhu
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kutarisirwa • Samoa Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iyo South Pacific Sustainable Tourism Network iri kuunza pamwechete vane pfungwa-dzakabatana vanobva mudunhu rese, vanosanganisira vanhu, mabhizinesi, vamiriri vehurumende, uye nyanzvi.
Kuunza pamwechete vane pfungwa dzakafanana vanobva kumatunhu ese, kusanganisira vanhu, mabhizinesi, vamiririri vehurumende, uye nyanzvi, South Pacific Sustainable Tourism Network ine chinangwa chekuchengetedza nhaka yemagariro enharaunda uye kuona kuti nharaunda inochengetedzwa kwezvizvarwa zvinotevera.
Imwe sisitimu yakadaro yakazvipira kune ramangwana rakasimba rePacific Islands iSinalei Reef Resort & Spa iyo yakavimbisa rutsigiro rwayo kunetiweki.
Sevatangi vekutanga veNetwork Sustainability Monitoring Chirongwa, Sinalei Reef Resort & Spa inounganidza uye inopa dhata yenguva dzose pamisoro dzakasiyana senge simba, mvura uye marara manejimendi; kusvibiswa; kuchengetedza uye tsika tsika.
Sinalei Kushambadzira uye Bhizinesi Rekuvandudza Bhizinesi, VaNelson Annandale, vakati chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira kudyidzana pakati pehotera kuita zvirongwa zvepasi zvinotarisana nematambudziko akakura epazvitsuwa, sekuderedza marara epurasitiki.
"Nekupa ruzivo kuchirongwa ichi, tinotarisira kubatsira dunhu kuronga hurongwa hwekuenderera mberi kwekushanya uye kuvaka nyaya yekuvandudza mutemo," akadaro.
"Sinalei Reef Resort & Spa ine nhoroondo yakasimba yemaitiro akatsaurirwa kugadzikana uye kuchengetedza vanhu, saka kuvimbisa mubatanidzwa wedu neSouth Pacific Sustainable Tourism Network chinhu chakakodzera."
Iyo nzvimbo yekutandarira yakadzika midzi munharaunda yemunharaunda uye ethos yayo inokudza madzitateguru emhuri uye inoshamisa nzvimbo yeSamoa. Inotsigira runyorwa rurefu rwezvipo zvemuno, zvirongwa uye mapoka enharaunda kuburikidza nemipiro, rubatsiro uye zvirongwa zvekutsigira.
“Zvimwe zvezvirongwa zvedu zvinokosha zvinosanganisira: kupa mari Palalaua College Cultural Fale mugore ra1997, iyo yakabva yashanda semusimboti wezviitiko zvakaita semisangano yemumisha uye kuratidzira kwetsika dzevadzidzi; kuramba uchipa zvakakosha uye mari kuchipatara chemusha; kutsigira Sinalei String Band nekutengesa maCD munzvimbo yekutandarira, nemari ichidzoka kubhendi; uye kutsigira kirabhu yemutambo werugby mumakwikwi eSinalei Sevens epagore, ”akadaro Nelson.
"Isuwo tinogara tichitsigira Poutasi Arts Center, chikoro chevana vasati vayaruka, uye ukulele, zvidzidzo zvekusona zvemuno nePoutasi Gardens, pamwe neimba yemunharaunda yemunharaunda uye zvirongwa zvekuzvipira zvemuno."
"Pakupedzisira, ruzivo rwedu rwepurazi-ndiro harungogumisi chikafu chinonaka uye chinonaka pamwaka panzvimbo yekudyira, asi zvakare inotsigira mhuri dzekurima."
Kuti udzidze zvakawanda nezve Sinalei Reef Resort & Spa, shanyira avo Website. Kuti udzidze zvakawanda nezve Nzvimbo Dzenyika Dzose Dzakasiyana, shanyira webhusaiti yedu kana kutitevera pane Instagram.